September 2017 – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Dhageyso Barnaamij Gaar Ah Weeraradii Waaweynaa Ee Dalka Ka Dhacay September 2017.
cusmaan	 Sep 30, 2017 0
Dhageystayaal/Aqristayaal, caawa waxaan barnaamijka Dhuuxa wareysiyada idinkugu bedelnay barnaamij gaar ah oo aanu ku eegnay weeraradii ugu waaweynaa ee bishan Septembar ka dhacay Soomaaliya. Waa weeraradii Buulo-gaduud, Beledxaawo iyo…
Halkaan Ka dhegeyso warka duhurnimo 10-01-1439 Hijiri
guuleed	 Sep 30, 2017 0
Insha allaah halkaan waxaan idin kugu soo gudbineynaa warka duhurnimo oo qodobo kale duwan lagu soo qaatay. Halkaan ka dhegeyso war duhur 30 09 2017
Imaarada Islaamiga ee Afqaanistaan oo baahisay Filim Xiiso badan. (Dhagayso Warbixin)
Ragga Ragga ah waa ciwaanka Filimkan xiisaha badan ee ay soo saartay mu’assasada manbacul Jihaad oo kamid ah warbaahinta Imaarada Islaamiga ee Afqaanistaan. Waa filim dhinacyo badan taabanaya, oo loo sameeyey qaab wanaagsan, waxaana la…
Kudhowaad 15 Askari oo Xukuumadda Kaabul Looga dilay dalka Afqaanistaan.
Wararka naga soo gaaraya dalka Afqaanistaan ayaa xaqiijinaya dhimashada inkabadan 10 Askari oo katirsan malleeshiyaadka xukuumadda Kaabul, kadib weerar culus oo ay kala kulmeen dagaalyahannada Imaaraada Islaamiga ee Afqaanistaan.…
Sheykh Cali Dheere : Dagaalkii Bariire Wuxuu Aargud ahaa Shacabkii Laglu Laayay Axmed Yare iyo…
Afhayeenka Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab Sheykh Cali Maxamuud Raage Sheykh Cali Dheere ayaa jeediyay kalimad uu ku faafaahiyay dagaalkii malxamadda ahaa ee maalintii shalay ka dhacay deegaanka Bariire ee Shabeellaha hoose, kaas oo lagu…
Halkaan ka dhegeyso warka subaxnimo 10-01-1439 hijri
Insha allaah halkaan waxaanu idin kugu soo gudbineynaa warka subaxnimo oo qodobo kala duwan lagu soo qaatay. Halkaan ka dhegeyso war Subax 30 09 2017
Halkaan Ka Dhegeyso warka duhurnimo 09-01-1439 hijri
guuleed	 Sep 29, 2017 0
Insha allaah halkaan waxaanu idin kugu soo gudbineynaa warka duhurnimo oo qodobo kala duwan lagu soo qaatay. Halkaan ka dhegeyso war duhur 29 09 2017
Dhageyso Barnaamijka Diiradda Jimcaha 09-01-1439.
cusmaan	 Sep 29, 2017 1
Diiradda Jimcaha waa barnaamij todobaadle ah oo lagu falanqeeyo qodobka ugu muhiimtan oo usbuuca taagnaa iyadoo laga qeyb galiyo dad xog ogaal u ah amaba uu quseynayo qodobka la lafa gurayo. Maantana waxaa barnaamijka lagu gorfeeyay…
Halkaan ka dhegeyso warka subaxnimo 09-01-1439 hijri
Insha allaah halkaan waxaanu idin kugu soo gudbinynaa warka subaxnimo oo qodobo muhiim ah lagu soo qaatay kuwaasoo uu ku jiro dagaal ka dhacay deegaanka bariire ee gobalka shabeelaha hoose. Halkaan ka dhegeyso war subax 29 09 2017…